Q-3aad Luga gorayo – dhugasho
Q-3aad Luga gorayo
Ha la yaaabin in Cali go watay maxaa yeelay waqtigaas ragga Soomaaliyeed sidaa ayey u labisan jireen. Waxay ahayd intaan macawisaha, saraawiisha iyo dhamaan dharka tolan geyiga Soomaaliyeed soo gaadhin. Cali isaga oo aan wali dhooroofin sirta ay haweenaydu la damacsan tahay, damaciisiina aan waxba uga hirgalin ayuu cadho la luuday. Wuxuuse naftiisa ku samirsiiyey inuu soo noqon doono isna oggolaysiin doono haweenayda.
Kalkii xigay ee Garaadku gurigiisii usoo hoyday ayey maamuus ka dib u sheegtay wixii dhacay oo dhan. Waxay ku dhammaysay xogwarankeedii “nin kula caqli iyo hawaba ah ama noqon kara ayaa Bartire ku jira ee hooy qabka jooji.” “Ninbaa xalay oo dhan i shukaansanayey oo go’aan ku gaadhay inuu iga kaa qaado.” Garaadkii ayaa cadho cirkaa maray oo si qaadan waa iyo quudhsi ku jiro u yidhi “waa kuma ninkaasi habeenkaa caawa ah ayaan unuunkiisa jarayaaye?” Way u dajisay oo tidhi waxba inaad dagaalantid uma baahnid saa damac uu isagu i damco waa halkiisee, waxba iga qaadi mahayo aniguna doonimahayo isaga. Waxaanse kuu shegayaa calaamad aad ku garan doonto barrito marka tolku shirayo ee aad ragga Bartire isugu yeedho. Oo maxay tahay calaamadaasi ayuu weydiiyey? Afarta faraq ee go’iisa mid ka mid ah ayaan xalay aslay oo sidaa ayaad ku garan doontaa. Waayahay bal barito waxaan ku dhigo hala soo dhawro ayuu Garaadkii ku seexday.
Cali nin irdhoon buu ahaaye gurigiisii markii uu tagay kadib ayaa waxaa ishiisu qabatay go’iisa oo ini guduudan tahay oo asal waxaad moodo ka muuqdo. War tolow yaa kuu cillaamay, ayuu isweydiiyey. Islamarkiiba intuu isagu isu jawaabay ayuu wuxuu fahmay inuu suntanyahay oo calaamad ragga lagaga sooco haweenaydii ku dhufatay. Wuxuu goostay inuu is badbaadiyo si aan qorshihiisu u fashilmin amnigiisuna halis u galin. Habeenkii ayuu si dhuumasho ah u guureeyey oo rag lagu qiyaasay 20 oo kuwa barri geedka shirka iman doona ka mid ah in asal ah go’yaashoodii kusoo wada jiiday. Haddii la barqaystay guurtidiina isu timid Garaadkii ayaa si doqoni ma garatay ah isha raggii ula raacay bal si uu u arko yarkii xalay afadiisa shukaansaday.
Jahjahasho gaaban ka dib, wuxuu la kulmay wax mucjiso ku noqday. Rag aan ka yarayn 20 oo wuxuu arkay mid walba dhinaca asal ku leeyahay. Haweenaydiisii ayuu u cadhooday oo uu is yidhi maxay kaa lugoynaysaa! Gurigiisii markuu ku noqday ayuu warsaday waxa ay uga jeeday macluumaadkii ay siisay. Ninkii miyaadan arag ayey su’aashay? Suuye ilaa 20 nin ayaa dacalka wada casaa ee waa see xaalku? Miyaanan kuu sheegin in nin kula garaad ah Bartire ku jiro ayey u celisay, qosol dheer dabadii.
Habeenkii xigay ayuu Cali soo noqday oo isku dayey inuu mar kale beer jileecsado haweenaydii isagoo hadalo macaan ka dib weydiiyey bal in mawqifkeedii wax iska badalay. Xaaraan caleeg iyo maya ayey isu raacisay, inuusan meesha ku dibdhicinna way u sheegtay hase yeeshee waa layska haasaaway in muddo ah ileen midkood walba dan gooni ah ayuu wataaye. Markii uu dheelman doono ayey isagoon dareensanayn go’ii uu hagoognaa fiidda hoose in yar ka goysay si bal ay calaamad ugu noqoto Garaadka barritoole. Markii Garaadkii soo hoydayna warkii ayey ku taabatay oo tidhi waxaad raadisaa nin dhinac go’an. Garaadkiina waa yahay kan yar bixisaa wadaan u malayne ayuu ku laabriixday.
Cali haddii uu gurigiisii tagay wuxuu markiiba isha ku dhuftay go’iisii oo dhinac dulaaqan yahay. Wuxuu gartay in haweenaydii mar kale sumadday. Isla habeenkii ayuu guuray oo uu si kali kali ah ula kulmay kontomeeyo nin oo uu ka dhaadhiciyey in Garaad Wiil Waal faray in dhammaan ragga barri kulmi doona mid walba go’iisa dacal ka gooyo. Waa arin yaab leh oo ay adag tahay inaan fahamno wuxuu uga jeedo, laakiin waa Garaadkeenii waxaanan hubaa inuu wanaageena laabta ku hayo sidaa awgeed waa inaynu adeecnaa oo aan fulinaa amarkiisa ayuu xujaystay. Imisa jeer ayuu hadda ka hor arin fajac badan inoola yimid; tanina waa mid kuwii hore uun la mid ah, ayuu raaciyey. Nimankii way qanceen dhamaantoodna waxay ku dhaceen dabinkii Cali oo ay farqaha wada jarteen.
Shirkii markii la yimid subixii xigay wuxuu Garaadkii fiirfiiriyey nin go’ dhinac go’an wata, hase ahaatee wuxuu arkay in ku dhawaad dhamaan ragga meesha jooga dacalku u wada jaran yahay. Talaa ku caddaatay oo in ninkii gedogedayn jiray ged cusub lasoo baxay ayuu xaqiiqsaday. Cawaysinkii ayuu xaaskiisii uga waramay in rag ilaa kontomeeya ah oo go’yaal dhinaca wada go’an wata goobta joogeen. Qosol ayey ka wareegtay, mar labaadna ku abhisay inuusan is mahadinin oo aan islaweyni indha duubin maxaa yeelay rag caqli u saaxiib ah oo kale ayaa Bartire dhex bariisan haya.
Habeenkii saddexaad ayuu Cali mar kale isku dayey inuu haweenaydii beerlaxawsado isagoo kolba sheeko cusub oo tii hore ka macaan u saaraya. Way uga dhaaratay inay waxba ka yeesho oo inna wax beer nugayl ah wuu kala kulmi waayey. Waxay damacday inay fashilkiisa si habboon uga shaqayso iyadoon rag isku dilin. Waxay haddaba la gashay sheekooyin kale duwan oo dhacdooyin hore sida dagaalo, taariikho, jacayl iwm isagu jira oo Bartire dhexdiisa ah. Habeenkii oo dhan ayey halkii fadhiyeen oo sheekaba sheekay keentaaye barigii kalana waa tiida gureen, siddii laba ruux oo waligood is yaqaanay in muddo ah aan is aragna u sheekaysteen iyadoo waliba aqalka daahu u xidhan yahay. Goor ay waa soodhawaadkii tahay ayuu Cali is arkay isagoo gunduruxsanaya oo wakhtigiiba illoobay, markaa ayuu gurigiisii u dheelalaabay isagoo og in mar dhaw shirkii la isugu iman doono.
Q-21aad Taxanaha adeegto
Abwaan Khaliif Maniinaa